अर्थ / पर्यटन – हाम्रो देश
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आफ्ना कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुलाई देशका विभिन्न स्थानमा ४५ प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध गराउने भएको छ । विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, बुटिक, जिम/फिटनेस सेन्टर, अस्पताल, फार्मेसी तथा डेन्टल क्लिनिकहरुसँग ४५ प्रतिशत छुट दिन सम्झौता गरेको हो ।…
काठमाडौं । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीम मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । दुई कम्पनीहरुबीच बिहीबार १ बराबर १ सेयर स्वाप रेसियो हुने गरी मर्जर सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यी दुई कम्पनीहरुको…
ललितपुर : राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छलिको मुद्दामा भक्तपुर सूर्यविनायक स्थायी घर भएका एभरेष्ट यति इन्टरनेश्नलका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले कम्पनीका सञ्चालकहरू दिपककुमार देउवा र अचला थापा देउवाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध विभागले ९ करोड…
काठमाडौं : कुमारी बैंक लिमिटेडले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा हेलिकप्टर चार्टर गरेर गई वृद्धभत्ता वितरण गरेको छ । विकट स्थानमा रहेको गोरखाको चुम्नुब्री क्षेत्रमा सडकको पहुँच छैन । जसका कारणले ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्ध–वृद्धाहरूले आफ्नो वृद्धभत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता…
काठमाडौं : कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले थप शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा सोमबारबाट सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नंं ०७ अमरलति चोकमा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डाक्नेश्वरी…
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सरकारले लगभग सात प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विभिन्न योजनाअन्तर्गत श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता श्रमिकबाट सङ्कलन गरेको १५ अर्ब ५७ करोडमध्ये विभिन्न चार योजनाअन्तर्गत एक अर्ब…
राजस्व न्यायाधिकरणमा नै झन्डै ८ अर्ब बराबरको चलखेल
काठमाडौं : विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधिकरणमा नै झन्डै ८ अर्ब बराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । समितिले छानबिनका लागि बुधबार पत्राचार गर्दै सबै विवरण माग गरेको छ…
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज बुधबारदेखि नियमित काममा फर्किने भएका छन् । २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार २५ चैतबाट निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्किने बाटो मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खुलाइदिएको थियो । गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको अल्पकालीन…
काठमाडौं : सनिमा बैंकले नयाँ वर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई ‘सानिमा डबल धमाका मुद्दती खाता’ सार्वजनिक गरेको छ । व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस मुद्दतीमा ग्राहकहरुले न्यूनतम रु। ५००,००० को मुद्दती खोल्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले यो योजनामा उक्त…
काठमाडौं : एनआईसी एशिया बैंकले चालू आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार बैंकका समग्र वित्तीय विवरणका परिसूचकहरू उत्साहजनक देखिएको बैंकले बताएको छ । बैंकले आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा कर्जा व्यवसायतर्फ कुल कर्जा…